प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा चुनावी चहलपहल: कांग्रेस ढुक्क, गठबन्धन मख्ख – Online Khabar
५. विप्लव समूहबाट प्रभात चलाउने र जन्मदेव जैसीसहित ५ जना निस्काशित
६. तरकारी किनेर आउँदा बाटो ढुकेर एसिड आक्रमण
७. नेकपा सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीले अस्वीकृत गर्न सक्छ : युवराज ज्ञवाली
८. संघीयताको विरोध गर्नेहरु अबुझ हुन् : मुख्यमन्त्री पोखरेल
९. जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा जान मन्त्रीको स्वीकृति अनिवार्य
१०. दिलबहादुरको ‘ब्लडमनी’बाट ३७ लाख बचत
१२. ओली सर, मधेसमा सीके राउत धेरै भएछन् है !
रिजेन्द्रले क्यानडाका जिएमलाई हराए
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा चुनावी चहलपहल: कांग्रेस ढुक्क, गठबन्धन मख्ख
शेरबहादुर सिंह/धनबहादुर भण्डारी/रासस
२०७४ कार्तिक २८ गते १७:२७ मा प्रकाशित
२८ कात्तिक, डडेल्धुरा । अासन्न मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको चहलपहल प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा बढ्दै गएको छ ।
विसं २०४८ देखि लगातार निर्वाचन जित्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा छैटौँ पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । उहाँसँग वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य खगराज भट्ट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
करीब तीन दशकदेखि डडेल्धुरामा पकड बनाएको कांग्रेसले केही समयअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अमरगढी नगरपालिकामा हार ब्यहोरेको थियो । त्यसकारण पछिल्लो समय कांग्रेस पहिलाको भन्दा कमजोर हुन पुगेको आँकलन गरिएको छ । यद्यपि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको नतिजाले कुनै असर नपार्ने कांग्रेसका स्थानीय नेता बताउँछन् ।
जिल्लाको प्रदेशसभा ‘ख’का उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका पार्टी सभापति कर्ण मल्लले निर्वाचन जित्न कुनै समस्या नभएको बताए । “प्रधानमन्त्रीज्यू डडेल्धुराको मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमकै अभिभावक हो ।” उनले भने– “यहाँका मतदाता कहिल्यै कांग्रेसको विपक्षमा हुँदैनन् ।”
“म र रघुवर भट्टजी प्रदेशमा लड्दै छौँ ।” मल्लले भने– “जिल्लाभर सबै भ्रातृसंगठन चुनावीसभामा खटिएका छन् ।” उनले सभापति देउवाविरुद्ध गठबन्धनले विभिन्न अपवाह फैलाएको आरोपसमेत लगाए । “चार चार पटक प्रधानमन्त्री भएर यो देश हाँकिसकेका व्यक्तिले रोजगारी दिन सकेनन् भन्ने कुरो हुन्छ ? ।” उनले भने– “हेर्दै जानुस् गठबन्धनका उम्मेदवार नै केही दिनमा कांग्रेसमा आबद्ध हुँदैछन ।” उनले डडेल्धुरामा कांग्रेस १० हजारभन्दा बढी मतअन्तरले निर्वाचन जित्ने दाबीसमेत गरे ।
वाम गठबन्धनका उम्मेदवार भट्टले चार/चार पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले जिल्लाको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसकेको र आवश्यक मात्रामा विकास निर्माणका कामसमेत नगरेकाले डडेल्धुरावासीले यस पटक उहाँको विकल्प खोज्ने बताए ।
त्यसैगरी, वाम गठबन्धनबाट प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार तथा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष डा. तारा जोशीले डडेल्धुरामा यस पटक वाम गठबन्धन जित्ने बताए । “धेरै मान्छे तटस्थ र स्वतन्त्र छन्” उनले भने–“उनीहरुले गठबन्धनलाई सहयोग गर्छन् ।” गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा आठ हजार मत बढी ल्याएकाले निर्वाचन जित्नेमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार डा. जोशी ढुक्क छन् ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति मल्लले देउवाविरुद्ध डडेल्धुरामा सधैँ गठबन्धन हुने गरेको र पटक पटक सफल हुन नसकेको बताए । “यस पटक देशव्यापी रुपमा वाम गठबन्धन भएकाले नौलो विषय लागेको हो ।” सभापति मल्लले भने– “डडेल्धुरामा त २०४८ सालदेखि नै कांग्रेसको विपक्षमा गठबन्धन हुँदै आएको छ ।”
उनले जति गठबन्धन भए पनि डडेल्धुरामा कांग्रेसलाई असफल पार्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे । “यहाँ धेरै गठबन्धनका पात्र कांग्रेससामु टिक्न सकेका छैनन्,” उनले भने। गठबन्धनले डडेल्धुरामा देउवाले केही गर्न सकेन भन्नु अनर्गल प्रचारबाजी मात्रै भएको उनको दाबी छ ।
यस्तै, डडेल्धुरा शिक्षक संघका अध्यक्ष कर्ण मडै स्थानीय तहमा कांग्रेसको आपसी तालमेलले मात्रै केही ठाउँमा पराजय व्यहोरोको बताउछन् । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जितका लागि कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । “काँग्रेस अहिले आन्तरिक गुटबन्दी हल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रेको छ, मतपरिणाम कांग्रेसकै पक्षमा रहन्छ,” मडैले भने ।
एक सय १७ वटा मतदान केन्द्र रहेको डडेल्धुरामा आसन्न निर्वाचनमा ८१ हजार ७०० भन्दा बढी मतदाता रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री वाम गठबन्धन शेरबहादुर देउवा